Sidee mid saadaalin dhaqanka ee heerka of cryptocurrency ah marka la eego tirada amarada kaalinta? - Blockchain News
Waa maxay nooca nidaamka of iibsashada ama iibinta cryptocurrency a on sarrifka ah online?
Ina keena aynu odhan aad rabto in aad iibsato mid ka mid ah Seeraar waayo, $9,500. Markaas waxaad u baahan tahay inaad wax ka sheegi doonayay si suuqa iyo kuwa ku iibinaya iman kara soo saaray warmurtiyeed amarka. Iibiya muuqan si la mid ah by iclaamiyeen inay jecel yihiin inay iska iibiyaan Seeraar qiimo gaar ah. Marka waxay doonayaan, gada beego awoodaha iibsanayaan, macaamil ganacsi ee waxaa si toos ah lagu soo gabagabeeyay. diyaariyeen ah ee amarada aan weli la buuxiyo waxaa lagu diiwaangeliyaa waxa loo yaqaan kitaabka amarka.
Sida caadiga ah, on is dhaafsi ah, Buugga waxaa lagu soo bandhigay qaab miis, halkaas oo codsiyada of iibinaya waxaa lagu tilmaamay in cas, oo iibsada ah’ codsiyada waa in cagaaran. Jaantuska miiska tuso tirada lacagta birta ah iyo qiimaha kaas oo ay doonayaan in ay ka iibiso ama iibsato. faafidda A waxaa la aasaasay at kulanka of looxyada, ama farqiga qiimaha of baahida iyo. The faafinta hoose, dheeraad ah oo dareere ah hantida ugu crypto.
In shaxda kor ku xusan, wada ee xadka la iibsado iyo iibiyaan amar ka wakiil yahay derbiyada in xilliyo ku milmaan. barta of xiriir oo ka mid ah derbiyada cagaaran, iyo kuwo gaduud waa dhibic ka mid ah heerka hadda cryptocurrency ah.
Buugga waxaa ku jira amar xadidan oo kaliya, sida amarada suuqa (dhigay at qiimaha uu suuqa ka) waxaa isla markiiba ogaaday, oo aysan macno kasta si ay u muujiyaan in buugga amarka.
Falanqaynta of buug amarka waa tilmaame hoggaamineed ee xaaladaha suuqa, sida ay u ogolaanaya mid loo oddoroso isbedel ka hor inta aysan dhici. Haddii, tusaale ahaan, waxaan arki raasamaal badan oo dalab fulinta ee xadka qiimaha sare, waxaan saadaalin karaa in sida ugu dhakhsaha badan suuqa gaaro xadka this, waxaa jiri doona hoos u dhac ah ka xanaajisay by tiro badan oo iibka.
amarada Equal ciyaartoyda waaweyn ay sidoo kale muhiim u ah samaynta ganacsiga go'aannada, sida ay had iyo jeer waa dareemi kitaabkii amarka iyo si weyn u baddalo kartaa in lays ciidamada. Amarada inta badan muuqan kitaabkii amarka in aad ugu dhow xaaladda suuqa ay yihiin. Marka suuqa guuro in hal jiho ama mid kale, ay jiido in qiimaha suuqa ee, saxo dhaqdhaqaaqa kuwan. At daqiiqado marka qiimaha dhawaado heerka iska caabin, amarada dadban (hoggaansanaayeen heer la mid ah) meel u dhow midba midka kale in qiimaha, go'an yihiin kitaabkii amarka.
Heerka cryptocurrency a
In ka badan 1200 dukaano magazine ee Australia waxaa bixiya adeeg shopping Seeraar sida 1-dii March
Laga bilaabo maanta Australia ...
Visa GO'DA ee Europ ...
Post Previous:Blockchain News 17.05.2018
nectary ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 21, 2018 at 6:41 PM
emaciated ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 22, 2018 at 5:44 PM
Technology ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 23, 2018 at 10:45 PM
Seitensprung ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 25, 2018 at 8:56 PM
agiso ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 29, 2018 at 2:31 AM
선릉야구장 ayaa sheegay in:
solidify ayaa sheegay in:
down ayaa sheegay in:
Harvey ayaa sheegay in: